रोकिएन विद्या शर्माको अपराध यात्रा – यी विद्याको सुन्दरतामा मोहित हुदा लुटिए धेरै युवाहरु ! – Halkhabar kura
१४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ११:१३
रोकिएन विद्या शर्माको अपराध यात्रा – यी विद्याको सुन्दरतामा मोहित हुदा लुटिए धेरै युवाहरु !
उजिर कार्की-सुनसरी इटहरीकी विद्या सरकार शर्मा यतिबेला काठमाडौं प्रहरी परिसरको हिरासतमा छिन्। काठमाडौं प्रहरीले पुस ६ गते पक्राउ गरेको हो। त्यसयता उनलाई हिरासतमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
तर, २३ वर्षीया विद्याविरुद्ध उजुरीको संख्या भने दिनदिनै थपिँदै गएका छन्। दैलेखकी तप्तकुमारी थापाले जाहेरी दिएपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। अभद्र व्यवहारसम्बन्धी सो मुद्दा प्रहरीले केही दिनपछि अदालत लैजाने तयारी गरेको छ।
सुरुमा व्यापारीले उधारो पत्याएका थिएनन्। तर कार्यक्रम सकिएपछि बिलभर्पाइ पठाउनू, रकम निकासा हुन्छ भनेपछि शर्मिला स्टेशनरी र लक्ष्मी स्टोरका सञ्चालक विश्वस्त भए। विद्याले यी पसलबाट सामाग्री लगेर वितरण गरेकी थिइन्।
यसबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी बताउँछ। त्यसो त दैलेखमा मुद्दाको किनार लागेपछि पनि उनले छुट पाउने अवस्था छैन।
अभद्रव्यवहारमा उनलाई बढीमा २५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्छ प्रहरीले। तर त्यसपछि अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार नपठाएर धरौटी लिएर वा सामान्य तारेखमा छाड्न पनि सक्छ।
यदि छुटेको अवस्थामा तत्काल दैलेख लग्ने तयारी प्रहरीको तयारी छ। तर पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएमा र अर्को जिल्लामा भएको मुद्दाको हद म्याद सकिने अवस्था आएमा उनलाई कारागारबाटै अनुसन्धानका लागि पठाइने प्रहरीले जनाएको छ।
विद्या शर्माले फेमिना चापागाई नामक फेसबुकबाट पनि धेरैलाई ठगेकी छिन । लगभग ४ बर्ष पहिले पनि यिनकोबारे सनसनीपूर्ण समाचार आएको थियो तर आजसम्म यिनले आफ्नो सुन्दरताको आवरणमा अपराध गर्दै आएकी छिन ।
Previous ‘मिस्टर सुप्रास्टार सर्च–२०२०’ :- ३७ देशका ‘ह्यान्डसम’ पछि पार्ने नेपाली डाक्टर सन्तोष उपाध्याय
Next नेपालको जलबिद्युत उद्योगलाई तहसनहस बनाउन भारतले जारी गरेको नयाँ नियम यस्तो छ !